Fianarana momba ny fampihomehezana momba ny Porn Harms - The Reward Reward
Home News Blog Fanadihadiana momba ny Porn Harms
Fanadihadiana momba ny Porn Harms
Ny famoahana ny famaritana ny aretina miteraka firaisana ara-nofo maharikoriko amin'ny volana Jona 2018 avy amin'ny WHO dia nifototra tamin'ny porofo ara-piraisana. Na izany aza, misy ny olona mandà hatrany fa ny fihinanana sary vetaveta dia mety hiteraka fahavoazana ara-tsaina na ara-batana. Amin'ity bilaogy ity dia jerena ireo fanadihadiana 6 nateraka izay navoaka hatreto izay mampiseho ny antony nahatonga ny mpandray anjara nanala ny fampiasana sary vetaveta ary nanasitrana ny fihenan'ny firaisana ara-nofo. Izy rehetra dia mampifandray ny fampiasana sary vetaveta na fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny tsy fetezana ara-nofo sy ny filana ambany.
1) Mijery Internet ve ny Pornography Internet? Famerenana amin'ny Reports Clinical (2016)
Fanadihadiana lalina momba ireo boky sy gazety momba ny olana ara-pananahana. Ny fampidirana ireo dokotera mpikarakara ny Navy 7, dia mamoaka ny angon-drakitra farany izay mampiseho fiakarana goavana amin'ny olana ara-pananan'ny tanora. Mampahatsiahy ihany koa ny fandinihan-draharaha momba ny fandinihan-tena mifandraika amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôjia sy ny fitondran-tena amin'ny alalan'ny pôrnôn'ny Internet Ny dokotera dia manome tatitra momba ny klioban'ny 3 momba ny lehilahy izay namorona fanao an-tsokosoko ara-pananahana. Ny roa amin'ireo lehilahy telo dia nanasitrana ny fanararaotana ara-nofo tamin'ny alalan'ny fanafoanana ny fampiasana sary vetaveta. Nihatsara kely ilay lehilahy fahatelo satria tsy afaka nifady tamin'ny fampiasana sary vetaveta izy. ampahany:
Ny fanao nentim-paharazana, izay nanazava tamin'ny fotoana iray fa ny olana ara-pananan'ny lehilahy dia tsy ampy ny fitazonana ny fihenan'ny aretin-kozatra, ny ejaculation tsy misy hatak'andro, ny fahafaham-pitondran-tena ara-pananahana, ary ny fihenan'ny libido mandritra ny firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy eo ambany 40. Ity fanadihadihana ity (1) dia mandinika ny angona avy amin'ny sehatra maro, ohatra: klinika, biolojika (fiankinan-doha / urôlôjia), ara-tsaina (ara-pananahana ara-nofo), sosialy; ary (2) dia manolotra andianà tatitra momba ny klinika, izay rehetra mikasa ny hanolotra torolàlana azo atao amin'ny fikarohana amin'ny ho avy. Ny fanovana amin'ny rafi-panentanana ao amin'ny atidoha dia nojerena ho etiology azo tsapain-tanana amin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny firaisana ara-nofo.
Ity fanadihadihana ity koa dia mandinika ny porofo manamarika fa ny voka-pifandraisana tsy manam-paharoa amin'ny Internet (sarimihetsika tsy manam-petra, mety hiteraka fihenam-bidy mankany amin'ny fitaovana maoderina kokoa, lahatsary, sns.) Dia mety ho ampy tsara amin'ny fampiasana ny firaisana ara-nofo amin'ny endriny amin'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet izay tsy mora mivadika amin'ny tena izy -ny mpiara-maty, toy ny hoe ny firaisana ara-nofo amin'ny mpiara-miasa maniry dia tsy afaka misoratra anarana ho andrasan'ny fihaonambe sy ny fihenan'ny fanambarana. Ny tatitra momba ny klinika dia manondro fa ny fampiasana ny sary vetaveta amin'ny Internet indraindray dia ampy hamerenana ny vokatra ratsy, ary manizingizina ny filàna fanadihadiana lalina amin'ny fampiasana metodôma izay manana lohahevitra hanaisotra ny habetsahan'ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet.
Ny valin'ny Fanamarinana nanoratra tantara iray momba ity fianarana ity rehefa nivoaka voalohany izy.
2) Ny fahazarana masturbation eo amin'ny lahy sy ny taovam-pananahana (2016)
Ity fianarana ity dia avy amin'ny mpitsabo aretin-tsaina Frantsay izay filoha ankehitriny Federasiona Eoropeana momba ny firaisana ara-nofo. Na dia miova miandalana aza ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet sy ny masturbation, mazava ho azy fa miresaka matetika amin'ny mamoafady-mianatra dysfunction sexuelles (erectile dysfunction and anorgasmia). Ny taratasy dia mitodika amin'ny traikefa ara-pahasalamany amin'ny lehilahy 35 izay nanamboatra dysfunction erectile sy / na anorgasmia, ary ny fomba fiasa ara-pahasalamany hanampy azy ireo. Milaza ny mpanoratra fa ny ankamaroan'ny marariny dia mampiasa pôrnôgrafia, miaraka amin'ireo maromaro maniry ho amin'ny filokana. Ny teboka manintona amin'ny pôrnôn'ny aterineto ho antony voalohany amin'ny olana (mitadidy fa ny masturbation dia tsy miteraka ED ED, ary tsy omena ho antony i ED). Ny 19 an'ny lehilahy 35 dia nahita fiovana lehibe teo amin'ny fanatanterahana ny firaisana ara-nofo. Ny lehilahy hafa dia tsy nodidiana na mbola miezaka ny hiverina. sombiny:
Intro: Tsy manisy ratsy ary manampy mihitsy aza amin'ny endriny mahazatra, mny asturbation amin'ny endriny be loatra sy malaza indrindra, izay mifandray ankehitriny amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia, dia matetika loatra no tsy jerena amin'ny fanombanana ara-pitsaboana ny tsy fetezana ara-nofo mety hiteraka.
Results: Valiny voalohany ho an'ireo marary ireo, aorian'ny fitsaboana "mampianatra" ny fahazaran-dry zareo masturbatory sy ny fiankinan-doha matetika amin'ny pôrnôgrafia dia mamporisika sy manome toky. Ny fihenan'ny soritr'aretina dia azo tamin'ny marary 19 amin'ny 35. Nihena ny tsy fetezana ary afaka nankafy fanaovana firaisana ara-nofo nahafa-po ireo marary ireo.
Famaranana: Ny filan-dratsy amin'ny fiankinan-doha, matetika miaraka amin'ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia amin'ny pôrnôgrafia, dia hita fa mitana anjara toerana amin'ny etiology karazana fihenan'ny erectile na anejaculation coital. Zava-dehibe ny famantarana ara-dalàna ny fisian'ireny fahazarana ireny fa tsy ny fanaovana diagnostika amin'ny alàlan'ny fanesorana, mba hampidirana ireo teknika fanapahana fahaverezan'ny fahazarana amin'ny fitantanana ireo disfunction ireo.
3) Ny fomba fampiasana masturbator tsy mahazatra ho toy ny etiolojika amin'ny aretina sy ny fitsaboana ny tsy fahampiana ara-nofo amin'ny zatovolahy (2014)
Ny iray amin'ireo fanadihadiana 4 momba ity raharaha ity dia mitatitra momba ny lehilahy iray manana olana ara-pananahana ara-pananahana (libido, fetishes, anorgasmia). Ny fiverimberenan'ny firaisana dia nitaky ny fialan-tsasatra 6-herinandro amin'ny pôrnôgrafia sy ny masturbation. Taorian'ny volana 8 dia nitatitra ny olona fa nitombo ny faniriana hanao firaisana ara-nofo, fahombiazana ara-nofo ary orgasme, ary mankafy "fomba fanao ara-nofo tsara. Ity no fanadihadiana voalohany momba ny fandinihan-tena amin'ny famerenana amin'ny fiterahana ara-piraisana ara-pananahana. Fitaovana avy amin'ny taratasy:
"Rehefa nanontaniana momba ny fomba fanao masturbatory izy dia nitatitra fa tamin'ny taloha dia nihanatanjaka mafy sy haingana izy tamin'ny fijerena sary vetaveta hatramin'ny fahazazany. Ny pôrnôgrafia tamin'ny voalohany dia ny zoophilia, ary ny fanandevozana, ny fanjakazakana, ny sadisma ary ny masochisme, saingy tamin'ny farany dia nanjary zatra an'ireto fitaovana ireto izy ary nila sary vetaveta henjana kokoa, anisan'izany ny firaisana ara-nofo, ny fironana ary ny firaisana mahery setra. Nividy sarimihetsika vetaveta tsy ara-dalàna tamin'ny fanaovana firaisana mahery setra sy fanolanana izy ary nijery sary an-tsaina ireo sary ireo tamin'ny fiheverany ny firaisana ara-nofo amin'ny vehivavy. Very tsikelikely ny faniriany sy ny fahaizany mamorona nofinofy ary mampihena ny fahaizany mihetsika.
Miaraka amin'ireo fotoam-pivoriana isan-kerinandro miaraka amin'ny mpitsabo ara-pananahana, ny marary dia nomena torolàlana mba tsy hisehoseho amin'ny zavatra maloto ara-nofo, anisan'izany ny horonan-tsary, gazety, boky, ary sary vetaveta amin'ny Internet.
Taorian'ny 8 volana dia nitatitra ny marary fa orgasme sy ejaculation mahomby. Nanavao ny fifandraisany tamin'io vehivavy io izy, ary nahomby tamin'ny fomba tsikelikely ny fanaovana firaisana ara-nofo tsara.
4) Tena sarotra ny manaja ny ejaculation amin'ny faharetana ao anatin'ny modelim-pahaizana momba ny fiarahan'ny lahy sy vavy. Fampitahana fianarana fianarana (2017)
Tatitra iray momba ny tranga "tranga roa" mampiseho ny antony sy ny fitsaboana ho an'ny ejaculation (anorgasmia). Ny "Patient B" dia naneho zatovolahy maromaro naroson'ny mpitsabo. Mahaliana fa ny gazety dia milaza fa "ny fampiasana sary vetaveta dia nihananjary ho fitaovana sarotra", "toy ny dia matetika". Milaza ny gazety fa tsy mahazatra ny ejaculation amin'ny pôrnôgrafia, ary mitombo. Ny mpanoratra dia mitaky fikarohana bebe kokoa amin'ny fiantraikan'ny pôrnôksa amin'ny fikarakarana ara-pananahana. Ny faharetan'ny ejaculation ny marary B dia sitrana taorian'ny herinandro 10 tsy misy pôrnôgrafia. sombiny:
Ireo tranga ireo dia tranga mitambatra avy amin'ny asako ao amin'ny National Health Service ao amin'ny Croydon University Hospital, London. Amin'ny tranga farany (Patient B), zava-dehibe ny manamarika fa ny fampisehoana dia maneho maromaro maromaro izay notononan'ny mpitsabo azy ireo tamin'ny diabeta mitovy. Patient B dia taona 19-taona izay natolony satria tsy afa-nandrahona tamin'ny alalan'ny penetration izy. Raha 13 izy, dia nijery matetika ny tranonkalan'ny pôrnôgrafia izy na tamin'ny alalan'ny fikarohana tao amin'ny Internet na tamin'ny rohy izay nalefan'ny namany azy. Nanomboka nifoka sigara izy isaky ny alina rehefa nikaroka ny findainy ho an'ny sary ... Raha toa ka tsy mazoto izy dia tsy afaka natory. Nihanitombo ny fampiasana sary vetaveta izay nampiasainy, toy ny mahazatra (jereo ny Hudson-Allez, 2010), ho lasa fitaovana sarotra (tsy misy ilana azy) ...
Ny marary B dia niharan'ny sary mamoafady tamin'ny alàlan'ny pôrnôgrafia nanomboka tamin'ny faha-12 taonany ary ny sary vetaveta nampiasainy dia nihanitombo tamin'ny fanandevozana sy ny fanapahana tamin'ny faha-15 taonany.
Nanaiky izahay fa tsy hampiasa pôrnôgrafia intsony izy hivezivezy. Midika izany fa hamela ny telefaoniny any amin'ny efitrano hafa amin'ny alina. Nanaiky izahay fa hanadio amin'ny fomba hafa izy….
Patient B dia afaka nahatratra orgasme tamin'ny alàlan'ny fidirana tamin'ny fivoriana fahadimy; ny fivoriana dia atolotra indroa isam-bolana ao amin'ny Hopitaly Croydon University ary ny fivoriana faha-10 dia mitovy amin'ny XNUMX herinandro eo ho eo avy eo amin'ny consultation. Faly sy afa-po tanteraka izy. Tao anatin'ny fanarahana telo volana niaraka tamin'ny Patient B dia mbola nandeha tsara ihany ny raharaha.
Patient B Tsy tranga mitokana ao anatin'ny National Health Service (NHS) ary raha ny marina ny zatovolahy amin'ny ankapobeny amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana psychosexual, tsy misy ny mpiara-miasa aminy, dia miresaka momba ny fikomian'ny fiovana.
Ity lahatsoratra ity noho izany dia manohana ny fikarohana teo aloha izay nampifandray ny fomba fivaviana amin'ny tsy fetezana eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny sary vetaveta amin'ny fomba filokana. Ny lahatsoratra dia namarana tamin'ny fanolorana hevitra fa ny fahombiazan'ny mpitsabo psychosexual amin'ny fiaraha-miasa amin'ny DE dia tsy dia voarakitra ao amin'ny literatiora akademika, izay namela ny fiheverana ny DE ho aretina tsy azo sitranina hitsaboana azy. Ny lahatsoratra dia mitaky fikarohana momba ny fampiasana sary vetaveta sy ny vokany eo amin'ny filokana sy ny fihenan'ny taovam-pananahana.
5) Ny fiovan'ny toekarena ara-psikolojika: Fomba fianarana (2014)
Ny antsipiriany dia manambara tranga iray amin'ny fanjavonan'ny pôrnôgrafia. Ny hany firaisana ara-nofo maha-lahy azy alohan'ny fanambadiana dia matetika ny filaharam-batana amin'ny fijerena sary vetaveta - izay ahafahany mamelatra. Nolazainy koa fa ny firaisana ara-nofo dia mihamitombo kokoa noho ny filokana ho an'ny pôrnôgrafia. Ny singa manan-danja amin'ny fampahalalana dia ny "fanofanana indray" sy ny fitsaboana ny psyteria tsy nahasitrana ny fanavakavahana. Rehefa tsy nahomby ireo fitsaboana ireo, dia nanolo-kevitra ny mpitsabo mba handrara tanteraka ny filokana amin'ny filokana. Vokatr'izany, io fandrarana io dia nahatonga ny firaisana ara-nofo mahomby sy ny ejaculation amin'ny sakaizany voalohany indrindra teo amin'ny fiainany. Ekipa vitsivitsy:
I A dia lehilahy manambady 33 taona izay manana fironana ara-pananahana heterosexuel, matihanina avy amin'ny tontolo afovoany ara-tsosialy sy ara-toekarena. Tsy mbola nanao firaisana alohan'ny fanambadiana izy. Nijery sary vetaveta izy ary nivezivezy matetika. Ny fahalalany momba ny firaisana sy ny firaisana dia ampy. Taorian'ny fanambadiany, Andriamatoa A dia namaritra ny libido-ny ho ara-dalàna tany am-boalohany, saingy taty aoriana dia nampihena ny fahasarotana farany teo amin'ny olana ara-piterahana. Na dia teo aza ny fihetsiketsehana nandritry ny 30-45 minitra dia mbola tsy afaka nifoaka na nahazo orgasme izy nandritra ny firaisana ara-nofo tamin'ny vadiny.
Inona no tsy niasa?
Voamarina ny fanafody Atoa A; Clomipramine sy bupropion dia najanona, ary ny sertraline dia notazonina tamin'ny fatra 150 mg isan'andro. Ny fotoam-pitsaboana miaraka amin'ireo mpivady dia notontosaina isan-kerinandro nandritra ny volana vitsivitsy voalohany, izay narahin'izy ireo tapa-bolana sy taty aoriana isam-bolana. Soso-kevitra manokana ao anatin'izany ny fifantohana amin'ny fahatsapana ara-nofo sy ny fifantohana amin'ny traikefa ara-nofo fa tsy ny ejaculation dia nampihena ny fanahiana amin'ny fahitana sy ny mpijery. Hatramin'ny naharetan'ny olana na teo aza ireo fitsabahana dia nodinihina ny fitsaboana mahery vaika momba ny firaisana.
Farany dia nametraka fandrarana tanteraka amin'ny filokana izy ireo (midika izany fa nanohy nivezivezy tamin'ny pôrnôgrafia izy nandritra ireo fitsabahana tsy nahomby etsy ambony):
Voarara ny fanaovana firaisana ara-nofo. Ny fampihetseham-po mifantoka amin'ny fandrosoana (voalohany tsy fananahana na fananahana aorian'izay) dia natomboka. Andriamatoa A dia nanoritsoritra ny tsy fahaizana mahatsapa fanentanana mitovy mandritra ny firaisana ara-nofo raha oharina amin'ny zavatra niainany nandritra ny filokana. Raha vao nampiharina ny fandraràna ny filokana, dia nitatitra ny fitiavany hanao firaisana ara-nofo miaraka amin'ny sakaizany izy.
Aorian'ny fotoana voafaritra tsy voafaritra, ny fandraràna ny filokana amin'ny pôrnôgrafia dia mitarika amin'ny fahombiazana:
Mandritra izany fotoana izany dia nanapa-kevitra Andriamatoa A sy ny vadiny fa handeha miaraka amin'ny Teknolojian'ny Fanabeazana Manampy (ART) ary handalo insemination intrauterine tsingerina roa. Nandritra ny fotoana fanazaran-tena, Andriamatoa A dia nipoaka voalohany, ary taorian'izay dia afaka namoaka an-tsitrapo nandritra ny ankamaroan'ny firaisana ara-nofo izy mivady..
6) Ny fijerin'ny pôrnôgrafia dia manimba ny erectileuse amin'ny mason'ny tanora (2019)
Abstract: Ity taratasy ity dia mamakafaka ny tranga misy Ny fijerena sary vetaveta dia nahatonga ny dysfunction erectile (PIED), izay midika hoe herisetra eo amin'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny lehilahy noho ny fihenan'ny sary vetaveta amin'ny Internet. Ny tahirin-kevitra ara-tsosialy avy amin'ireo lehilahy mijaly amin'io toe-javatra io dia voangona. Ny fampifangaroana fomba fitantanana tantaram-piainana momba ny fiainana (miaraka amin'ny fanadihadiana momba ny kalitaon'ny asynchronous an-tserasera amin'ny aterineto) dia nampiasaina. Ny tahirin-kevitra dia nodinihina tamin'ny fampiasana ny fandikana hevitra ara-pitenenana (araka ny fampianaran'ny fampahalalam-baovao McLuhan), mifototra amin'ny fampidirana fanadihadiana. Ny fanadihadiana ara-pitsipi-pitenenana dia manondro fa misy ny fifandraisana eo amin'ny fihenam-bona amin'ny pôrnôgrafika sy ny tsy fetezan'ny dizitaly izay manome soso-kevitra.
Ny fikarohana dia mifototra amin'ny dinidinika 11 miaraka amin'ny diarin'ny horonan-tsary roa sy diary telo. Ny lehilahy dia eo anelanelan'ny 16 sy 52; Milaza izy ireo fa ny fampidirana am-piandohana amin'ny sary vetaveta (matetika mandritra ny fahazazana) dia arahin-tsakafo isan'andro mandra-pahatongan 'ny teboka iray izay hahitana ny votoatiny faran'izay henjana (tafiditra ao, ohatra, singa misy herisetra). Misy sehatra manan-danja iray no tratra rehefa mifamatotra amin'ny sary mamoafady amin'ny sary mamohehatra sy haingam-pandeha ny firaisana ara-nofo, ka mampifangaro ny fifandraisana ara-batana sy tsy mahaliana. Izany dia miteraka tsy fahafahana mitazona arofanina miaraka amin'ny mpivarotra tena izy, ary amin'izany dia miditra amin'ny "bindo indray" ny lehilahy ka mametraka sary vetaveta. Izany dia nanampy ny sasany tamin'ireo lehilahy mba hamerina indray ny fahafahany manatanteraka sy manohana ny fananganana.
Fampidirana ny fizarana valiny
Rehefa nanitsy ny angon-drakitra aho, dia nahatsikaritra lamina sasany sy foto-kevitra miverimberina, taorian'ny fitantaràna nandritra ny vanim-potoana nandritra ny tafatafa rehetra. Ireo dia: Fampidirana. Ny voalohany dia nampidirina amina sary vetaveta, matetika mialoha ny fahamaotiana. Manamboatra fahazarana. Ny iray dia manomboka mandany foana ny pôrnôgrafia. firongatry. Ny iray dia mitodika kokoa amin'ny endrika "henjana" amin'ny pôrnôgrafia, manan-tsaina, mba hahatratrarana ny vokatra mitovy talohan'izay amin'ny endrika "pesta" marevaka kokoa. Fanatanterahana. Ny iray dia manamarika ireo olana ara-pananahana ara-pananahana izay heverina ho vokatry ny fampiasana sary vetaveta. "Fanamboarana indray". Ny iray dia manandrana manitsy ny fampiasana sary vetaveta na manafoana tanteraka azy io mba hamerenana indray ny herin'ny lahy sy ny vavy. Ny angona avy amin'ny fanadihadiana dia aseho amin'ny alàlan'ny drafitra etsy ambony.
Ankoatra ireo fanadihadiana voatanisa etsy ambony, Ity pejy ity dia ahitana lahatsoratra sy lahatsary avy amin'ireo manam-pahaizana 130 (mpampianatra urôlôgy, urolistes, psychiatrists, psikologists, sexologists, MD) izay manaiky sy nahomby tamin'ny fikarakarana ny pôrnôgrafia ED sy ny fahaverezan'ny faniriana hanao firaisana ara-nofo.